Antomotra ny farany e !
Mikoropaka sy miady saina ny fanjakana Rajaonarimampianina amin’ny kapoka isan-karazany mihatra aminy.
Izay tsy faly mibontsina
Ho an-terisetra hatramin’ny farany ve izany no hanatontosana ny zava-drehetra mba ho tombontson’olom-bitsy ao anatin’ny 5 taona manaraka indray? Tsaroana ny fianianan’ny filoham-pirenena ankehitriny teo anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny vahoaka Malagasy nialohan’ny nandraisany fahefana 4 taona lasa izay.
Tsy re tsaika lasa, tsy re feo tonga�maro tamin�ireo manampahefana ambony Malagasy no efa manana fahazarana miala sasatra any ivelan�i Madagasikara rehefa tonga ny krismasy na ny taom-baovao.
Tsy vitsy koa ny artista no efa voafandrika mialoha fa hanentana lanonana any ivelany isaky ny alin’ny 31 desambra.Dia mba mitovy izany eto ny mpitondra sy ny artista; fa mba ahoan akosa ilay Malagasy tsotra, na ny vorona aza tsy taka-bidy eny an-tsena, ny vary lasa plastika, tratran’ny danik’andro avy eo kotsan’ny orana satria tsy mba manana fiara an’ny tena manokana fa na misisika taksibe na mandeha an-tongotra.Tsy sanatria fialonana ny anjaran’ny sasany fa tena goavambe loatra ny elanelana eo amin’ny manan-katao sy ny farahidiny eto amin’ity firenena ity.Fa ny tena manahirana indraindray dia ireo efa sady manan-katao no azo atao hoe manam-pahaizana no mbola manambaka ireo sahirana.Mamomboka malaza izao amin’ity 2017 ny fifidianana ary efa hipoitra tsikelikely ireo mety ho kandida; ny olona efa sahirana tsy manana faharetana handinika sy hamakafaka intsony fa anjaran’ireo mpanao politika ny miezaka mifehy tena sy manabe ny vahoaka fa tsy sanatria atakalo vary 1 kilao miampy menaka kely sy vola 10 000 Ar foana ny latsa-bato.Azo atao tsara ny mivoatra miha tsara fa tsy mihakazaka any amin’ny fahaverezana foana.